CSV Explorer: Shanda Nemahombe CSV Mafaira | Martech Zone
Muvhuro, September 28, 2020 Muvhuro, September 28, 2020 Douglas Karr
CSV mafaera ane hwaro uye anowanzo ari akaderera kwazvo dhinomineta ekupinza uye kutumira kunze data kubva kune chero system Tiri kushanda nemutengi izvozvi izvo zvine dhatabhesi hombe kwazvo yemafone (anopfuura mamirioni mashanu marekodhi) uye tinoda kusefa, kubvunza, uye kutumira chikamu che data.
Chii chinonzi CSV Faira?
A comma-akaparadzaniswa tsika faira idimendi remavara faira rinoshandisa komma kupatsanura tsika. Mutsara wega wega wefaira ndeye data rekodhi. Rekodhi yega yega ine imwechete kana yakawanda masango, akapatsanurwa nemakoma. Iko kushandiswa kwekoma sekuparadzanisa munda ndiko kunobva zita reiyo fomati fomati.
Desktop maturusi akaita seMicrosoft Excel neGoogle Mapepa ane kurambidzwa kwedata
Microsoft Excel ichatora maseti edata ane anosvika miriyoni imwe mitsara uye makoramu asina muganho mune pepanhau. Kana iwe ukaedza kuunza zvinopfuura izvo, Excel inoratidza yambiro iyo inoti yako data yatemwa.
Apple Numbers ichatora maseti edata ane anosvika miriyoni imwe mitsara nemakoramu chiuru muspredishiti. Kana iwe ukaedza kuunza zvinopfuura izvo, Numeri inoratidza yambiro iyo inoti yako data yatemwa.
Google Sheetsiti ichaunza maseti e data anosvika mazana mana emazana maseru, ane huwandu hwakawanda hwe400,000 pamakoramu pane sheet, anosvika 256 MB.
Saka, kana iwe uchishanda neiri hombe faira, iwe unofanirwa kuendesa iyo data mune dhatabhesi pane. Izvo zvinoda chikuva che database uye chishandiso chekubvunza kuisikidza iyo data. Kana iwe usiri kuda kudzidza mutauro wekubvunza uye chikuva chitsva… pane imwe nzira!
CSV Explorer chishandiso chiri nyore pamhepo chinokugonesa kupinza, kubvunza, chidimbu, uye kutumira data kunze. Iyo yemahara vhezheni inokutendera iwe kuti ushande pamwe neyekutanga mamirioni mashanu mitsara kwenguva pfupi. Dzimwe shanduro dzinokutendera iwe kuti uchengetedze seti yedhata anosvika mamirioni makumi maviri emitsara iwe yaunogona kushanda nyore nyore.
Ini ndakakwanisa kuendesa pamusoro pemamirioni mashanu zvinyorwa nhasi mukati memubvunzo wemaminetsi, kubvunza iyo data zviri nyore, uye kutumira kunze zvinyorwa zvandaida. Chishandiso chakashanda zvisina mutsindo!
CSV Explorer Zvimiro Sanganisira
Yakakura (kana yakajairwa Sized) Dhata - Mitsara mishoma kana mashoma mamirioni mitsara, CSV Explorer inoita kuvhura uye kuongorora makuru CSV mafaera nekukurumidza uye nyore.
Nyengedzera - CSV Explorer iri nyore kushandisa. Mune mashoma mashoma, kusefa, kutsvaga, uye kushandisa data kuti uwane tsono mudura kana kuti uwane iyo hombe mufananidzo.
ekisipoti - CSV Explorer inogonesa iwe kubvunza uye kutumira kunze mafaira - kunyangwe kupinza mafaera kumusoro nenhamba yezvinyorwa iwe zvaungade mune yega yega.
Fungidzira & Batanidza - Dhata yedhata, chengetedza magirafu emharidzo, kana kutumira mhedzisiro kuExcel kuti uwedzere kuongorora.
Tanga ne CSV Explorer
Tags: comma akapatsanurwa tsikaCSVcsv mutsvagaDatazvakanakisisaGoogle Sheetsitidhata rakakura